Afgaanistan - Wikipedia
Afqaanistan ama Jamuuriyadda islaamiga Afqaanistan Farsi جمهوری اسلامی افغانستان) waa wadan dhul xiran oo ku yaalo koonfurta ama bartamaha Aasiya.Wadankaan waxaa ku badan Buuraha, waxoona xuduud la leeyahay wadamada Bakistaan, Iiraan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Usbekistan iyo Shiinaha. Wadankaan caasimadiisa waa Kabul. Magaca afqaanistan waxaa loola jeedaa dhulka afqaanka..
2 deegaan ahaan
2.1 magaalooyinka uguwaawayn
3 hoos u dhaca gobolka
Afgaanistaan waxay leedahay taariikh aad iyo aad u dheer. waxa uu wadankani soomaray dagaalo sokeeye oo aad iyo aad u badan.
afgaanistaan waxaa laogyahy in ay tahy sababta koobaad ee keentay in uu burburo Midowga Sofiyet ilaa xiligii uu dhacay Midowga Sofiyet sanadii 1989 waxa afgaanistraan ka bilaabmay dagaalo sokeeye oo aad iyo aad ubadan ilaa hadana ka socda
Deegaanka ay kutaalo afgaanistaan waa dhul buuralay ah waxa ciida afgaanistaan ku yaala buuro aad ubadan afgaanistaan malaha wax dekada anma bada.
kabul oo ah caasimada
qandahaar caasimada labaad
Afgaanistaan waxa ay leedahay jawi aad iyo aad uxun xiliga jiilaalka oo barafka ayaa aad iyo aad ugada
hoos u dhaca gobolkaEdit
Afganistan waxay ahayd 40-kii sano ee la soo dhaafay colaadaha lala galo quruumaha kale, waxa ay ku xiran yihiin iran sida dadwaynaha, War saxaafadeed ka soo baxa Afganisatan ayaa muujinaya ixtiraam la'aanta hoggaamiyeyaasha caalamka https://news.sky.com/story/justin-trudeaus-lost-twin-abdul-salam-maftoon-finds-fame-in-afghan-talent-show-11608014
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Afghanistan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Afgaanistan&oldid=202288"
Last edited on 14 Juun 2020, at 19:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Juun 2020, marka ee eheed 19:41.